Dlala iingoma ezi-5 ezilula zeMandolin
Into yezi ngoma kukuvumela ukuba udlale iingoma ezilula kwi Mandolin . Emva kokuba ufunde iingoma, qiniseka ukuba udlala iipatheni zokucofa xa ulandela iindlela.
Kwimeko yokwenyani yomculo (kwibhendi), kuya kufuneka ukwazi ukudlala ingoma kuphela, kodwa ubonelele ngesingqisho esomeleleyo ngelixa abanye bedlala okanye becula ingoma. Iipateni zokucebisa eziphakanyisiweyo zibandakanyiwe kumzobo olandelayo.
Iipateni ezilula zokulinganisa
Mamela iingoma ngaphambi kokuba uzame ukudlala ezi ngoma. Ukudlala into ungazi ukuba kufanele ukuba kuvakale njani kunzima kakhulu. Mamela kuqala!
Iingoma ezintlanu kweli nqaku zibandakanyiwe kwiitreyini zomsindo kunye nenxalenye yomculo kwisithethi esifanelekileyo kunye nephethini yokuqhayisa kwisithethi sasekhohlo. Endaweni yokuxhomekeka kumdlali wegitare okanye kwisoftware ukuba ibe ngumkhondo oxhasayo, ndirekhode isingqisho se-mandolin kwingoma nganye. Ndikucebisa ukuba ufunde ukudlala isingqisho kwiingoma ukuze ukwazi ukudlala ingoma kunye nesingqisho. Iingoma zidlalwa kuqala nge-metronome kwaye emva koko kunye nokuhamba komtya.
Ode To Joy umxholo
Lo mxholo olula owaziwayo uvela kuBeethoven's Ninth Symphony. Nika ingqalelo kwicala lokukhetha kumgca wesithathu wale siqwenga. Sebenzisa iphatheni yokulinganisa 1.
Phantsi kwintlambo yingoma yesiko laseMelika abantu abaninzi abalivileyo amaxesha amaninzi. Le ngoma ikwixesha elingu-3/4, kwaye ke qiniseka ukuba uyayibala ngothotho oluphindaphindiweyo lweentsimbi ezintathu ezomeleleyo (jonga inani). Ndicebisa ukusebenzisa yonke imivumbo esezantsi xa udlala ingoma. Sebenzisa iphatheni yokulinganisa yesi-5 kwisingqisho.
Yiya Xelela uMakazi Rhodie
Abantu abaninzi bacule le ngoma besebancinci kakhulu. Ndicebisa ukusebenzisa yonke imivumbo esezantsi xa udlala ingoma, kunye nepateni yokulinganisa yesi-3 yesingqisho.
Yiya kwiLou yam
Tsiba eLou yam kuculwa ngabantu abaninzi njengabantwana abancinci. Landela ulwalathiso olusondeleyo. Umzekelo we-Strumming 2 usebenza kakuhle ngale ngoma.
I-Red River Valley (ekwabizwa ngokuba yiCowboy Love Song) yingoma endala yenkomo eqala ngasekupheleni kweminyaka yoo-1800. Iqala ngamanqaku amabini okupakisha (amanqaku awela phambi kwenqanaba lokuqala); amanqaku amabini okuqala abetha ii-3 ne-4. Dlala le ngoma usebenzisa konke ukubetha xa udlala umculo kwaye usebenzise ipateni yokulinganisa yesi-3 yesingqisho.
khuphela kwaye uncamathisele kwi-pc
imifanekiso yeepilisi ze-tramadol
Ipilisi emhlophe e-oblong ip190
vala amanzi ukuya endlwini
e 64 ipilisi vs xanax